China igba ígwè teapot ụlọ ọrụ na-emepụta | Womho
N'etiti ọtụtụ enameled tii tent, na-acha ọcha, siri na-egbuke egbuke, pụrụ iji tụnyere poselin teacups; eji ntupu ma ọ bụ ntanye agba chọọ ya mma, ọkwa ahụkwa doro anya, na-eji ikike nka siri ike karịa; ìhè style, pụrụ iche udi nke drum ekara tii iko na urukurubụba ekara tii iko; nwere ike rụọ ọrụ na nchekwa ọkụ, ma dị mfe iburu, enwere ike iji ya na-etinye tii, teaups with enamel enamel Tea plate, site na ọtụtụ ndị tii na-anabata.
Otú ọ dị, enamel tea setịpụrụ ikpo ọkụ na-ebufe ngwa ngwa, dị mfe iji kpochapụ aka, tinye ya na tebụl tii, ga-agba okpokoro okpokoro ọkụ, yana "ọnụ ala dị ala", ya mere, ojiji ejiri n'okpuru ụfọdụ mgbochi, n'ozuzu ha anaghị eji ụlọ ọbịa.
Banyere nlekọta onye ọrụ:
1, ite mmiri esi mmiri, iji wụnye 6 ~ 8 isi
zere mmiri si esi na ịwụfu site na spout.
2. Mgbe teapot elu okpomọkụ mmiri bụ enweghị, nwere mma tinye mmiri ọkụ, zere nnukwu okpomọkụ dị iche.
3.After teapot okokụre ojiji, na-eji mmapụta okpomọkụ na-tii teaport dry. zere ajari.
4. pls anaghị ekpo ọkụ efu nke teapot, zere teapot cracking.
5. mgbe dị n’ime teapot ka nwere ihe mmapụta okpomọkụ, hichapụ mpụga nke ite ahụ na mmiri tii, ọ dị mma maka ijigide ite igwe dị mma.
6.The ígwè tii ga-enịm ke nkụ iji zere mmiri.
ma ọ bụrụ na ogologo oge achọghị iji teapot, mgbe teapot akọrọ, ị nwere ike itinye akwụkwọ ma ọ bụ unyi ma ọ bụ achara unyi n'ime,
mgbe ahụ mbukota site Plastic bag.
7. Emepechaa ketulu ma jiri ya mee ihe, nchara na-acha uhie uhie ga-eji nke nta nke nta mepụta n’oge a na-eme ya.
A rustts bụ ajari-àmà oyi akwa kpụrụ site mmeghachi omume nke tii na ígwè.